Antetezana Afovoany : notokanana ny foibe Ilaiko | NewsMada
Antetezana Afovoany : notokanana ny foibe Ilaiko
Notokanana, omaly, ny ivontoerana momba ny fampandrosoana ny maha olona « Centre Ilaiko » ao Antetezana Afovoany, boriborintany voalohany. Toerana fandraisana fitarainan’ireo olona manana olana ity foibe ity.
Teo ny fiaraha-miasa teo amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Croix rouge malagasy ary ny Croix rouge danoise nahafahana nanangana ny foibe. Nanome ny tany ny CUA fa ny Croix rouge malagasy sy danoise kosa no niantoka ny fananganana ny fotodrafitrasa.
Misy ny « Centre Ilaiko » izay tantanin’ny departementa misahana ny sosialy ao amin’ny CUA sy ny « Centre Mamitasoa » tantanan’ny Croix rouge malagasy. Natao indrindra handraisana ny fitarainana avy amin’ireo olona manana olana eny amin’ny fokontany, toy ny ankizy sy vehivavy iharan’ny herisetra, ny olona tsy manana asa ity ivontoerana ity.
Eo koa ny fanohanana moraly sy toekarena amin’ny alalan’ny fanomezana fampiofanana amin’ny asa, ny fampianarana ireo zaza sahirana sy hikarakarana azy. Ankizy 3.000 sy vehivavy iharan’ny herisetra no kendrena nahazo tombontsoa amin’ny fanaganana izao foibe izao.
« Tetikasa efa napetraky ny ben’ny Tanàna, manakaiky ny vahoaka madinika amin’ny fitantanana ny tanàna izao », hoy ny filazan’ny CUA.
Nambaran’ny talen’ny sosialy ny CUA, Andriantseheno Prisca, fa anisan’ny nanampy ny “Centre Ilaiko” tamin’ny fampitaovana izao fanokafana izao ny Unicef. Efa misy telo ny foibe sosialy miorina eto Antananarivo Renivohitra. Anisan’izany ny BMH Isotry, Soavimasoandro ary ny eto Antetezana Afovoany. Tanjona ny hisian’ ny foibe manerana ny boriborintany enina eto Antananarivo Renivohitra.